एसपीले नै महिला प्रहरीलाई शारीरिक शोषण गरेको गोप्य कुरा गृहले थाहा पाएपछि के भयो ? — Sanchar Kendra
एसपीले नै महिला प्रहरीलाई शारीरिक शोषण गरेको गोप्य कुरा गृहले थाहा पाएपछि के भयो ?
नेपाल प्रहरीका एक प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) माथि गम्भीर संकट आई परेको छ । प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशाला सामाखुसीमा कार्यरत एसपी राकेशकुमार सिंहविरुद्ध गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेपछि हेडक्वार्टरले छानविन समिति गठन गरेको हो ।
तल्लो दर्जाका महिला कर्मचारीहरुलाई शारीरिक शोषण गरेको भन्दै सिंहविरुद्ध गृहमा बेनामी उजुरी परेपछि हेडक्वाटरले एसएसपी सूर्यप्रसाद उपाध्यायको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेको हो । यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।
तर, गोपनीयताका लागि नाम उल्लेख नगरिएको स्रोतले बतायो । अपराध अनुसन्धान विभागको प्रत्यक्ष मातहतमा समिति गठन भएको हुँदा उजुरी झुटो हो वा सत्य हो त्यो भने समितिले रिपोर्ट दिएपछि मात्रै खुल्ने छ ।
तर, चार जनाभन्दा बढी महिला कर्मचारीमाथि पटक–पटक गिद्धे आँखा लगाएर शारीरिक शोषण गर्न खोजेको भन्दै सिंहविरुद्ध प्रतिशोधकै आधारमा कसैले उजुरी हाल्ने अवस्था भने नरहेको स्रोत बताउँछ । यस अघि पनि सिंहविरुद्ध उजुरी परेको थियो ।
२०७५ साउन १७ मा प्रकाशित ।